Izindaba - 2020, amanani emakethe yensimbi yaseChina azokwehla kuqala bese enyuka, ngokushintshashintsha okukhulu nokukhuphuka
2020, amanani emakethe yensimbi yaseChina azokwehla kuqala bese enyuka, ngokushintshashintsha okukhulu nokukhuphuka
Ngo-2020, amanani emakethe yensimbi yaseChina azokwehla kuqala bese enyuka, ngokushintshashintsha okukhulu nokuphakama. NgoNovemba 10, 2020, inkomba yokuhlanganiswa kwentengo yensimbi kazwelonke izoba ngamaphoyinti ayi-155.5, ukwanda ngo-7.08% esikhathini esifanayo ngonyaka odlule. Isikhungo samandla adonsela phansi sesikhuphukile.
Ukufunwa kwabathengi kuzoba namandla kakhulu. Kusukela ekuqaleni kwalo nyaka, umnotho wezwe lonke usululeme ngokuqinile, izinga lokukhula komnotho likhombise ukubuyela emuva okwenziwe ngo-V, futhi ukutshalwa kwezimali okuzinzile sekuyinto okugxilwe kuyo ekulungiseni okuphambene nomjikelezo. Kulinganiselwa ukuthi ukufunwa kwensimbi engahluziwe (kufaka phakathi ukuthunyelwa kwensimbi ngqo) kuzokweqa kufinyelele ezingeni lamathani ayizigidi eziyizinkulungwane ezi-1, kufinyelele ekuqhumeni okusha emlandweni.
Izintengo zokuncibilikisa izinto zokusetshenziswa zikhuphuke kakhulu. Kusukela ekuqaleni kwalo nyaka, ngenxa yezimo ezahlukahlukene, amanani entengo ezakhiwe ngezinto zensimbi njenge-iron ore ne-coke akhuphuke kakhulu ezweni lonke, kwenyusa izindleko zokukhiqizwa kwensimbi nokwakha ukuxhaswa kwentengo okuqinile.
Ukwehla kwezinga lokushintshisana ledola laseMelika. Ngo-2020, intengo yensimbi kazwelonke iyashintshashintsha, nokwehla kwedola laseMelika nakho kuyinto ebalulekile. Ukwehla kwamandla edola laseMelika kuzokhuphula izindleko zokungenisa kwempahla yokuncibilikisa engenayo nemikhiqizo yensimbi engenisiwe, futhi kwandise namanani entengo yensimbi yasekhaya ngokufanele.
Ngo-2020, izintengo zensimbi zaseChina zizoshintshashintsha futhi zikhuphuke, okokuqala, isidingo sabathengi sizoba namandla kakhulu. Kusukela kulo nyaka, umnotho wezwe lonke usimame kancane kancane, izinga lokukhula komnotho seliphenduke ukubuyela emuva okumise okwakwa-V, futhi ukutshalwa kwezimali okuzinzile sekuyinto okugxilwe kuyo ekulungisweni komjikelezo. Ngenxa yalokhu, ukushuba kwensimbi yaseChina kuzokhuphuka kunokuba kwehle ngo-2020. Ikakhulukazi ngemuva kokungena engxenyeni yesibili yonyaka, ukufunwa kwensimbi kuzwelonke kuzoba namandla ngokwengeziwe Ngokwezibalo, kusukela ngoJanuwari kuya kuSepthemba kulo nyaka, ukusetshenziswa okubonakalayo kweChina okungcolile insimbi ibingamathani ayizigidi ezingama-754.94, ukwanda konyaka nonyaka ngama-7.2%. Phakathi kwabo, izinga lokukhula ngoJulayi lalingu-16.8%, kwathi ngo-Agasti kwaba ngu-13.4%, nokuthi ngoSepthemba kwaba ngu-15.8%, okukhombisa umfutho wokukhula oqinile Isidingo sensimbi (kufaka phakathi ukuthunyelwa kwensimbi ngqo) sizokweqa sifike kumathani ayizigidi eziyizinkulungwane ezi-1, ukugxuma okusha emlandweni